Indawo epholileyo yaseLakeside Studio Retreat.
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguLogan
I-studio ekwigumbi elisezantsi elithambileyo elibonelela ngokugqibeleleyo ukubaleka kunye nolonwabo olungapheliyo. Ukusuka kwi-oveni ye-pizza, ukukhwela inqanawa, ukuloba, ulwandle, ichibi, idokhi, umgodi womlilo, kunye nomngxuma wombona kunzima ukukruquka kwindawo esecaleni kwechibi!
Indawo yethu yokuhlala ebanzi engaphantsi, ebekwe kwindawo ethe cwaka yamanzi yaseDrum Point, enesilingi ezili-10 kunye nendawo yokungena yabucala zizinyuko ezikude nechibi. Ungaphumla kwi-dock kwizitulo ze-Adirondack, intlanzi kunye ne-kayak (ekhoyo kwindawo) echibini okanye uhambe ngeendlela ezijikelezileyo. Unokufikelela kulwandle lwaseChesapeake Bay ngokuhamba okufutshane, okunoxolo kwemizuzu emithathu. Ipatio yabucala, efihlakeleyo ivumela ukuhlala, ukubukela iintaka kunye nokuba yinto enye nendalo. Ukhozi, iiosprey kunye nookhwalimanzi zininzi kwaye zenza izifundo ezintle ukuba uyakonwabela ukufota. Yonwabela umsesane womlilo ogcwele iinkuni, i-charcoal grill kunye ne-oveni ye-pizza (imali eyongezelelweyo kunye noncedo lomninimzi luyafuneka). Umfoti oyingcali uyafumaneka xa eceliwe ngexesha lokubhukisha ukuze afake amaxesha akhethekileyo (intlawulo eyongezelelweyo). Iibhayisekile ziyafumaneka ukuze ukhenkethe indawo yethu yasemanzini Yonwabele ubushushu bendawo yethu yokubuyela umva, igqitywe ngamaplanga ashushu kunye neethayile zeceramic. Kukho ikhitshi eligcweleyo, kubandakanya isitovu, ioveni, ifriji egcweleyo, imicrowave, ineembiza/iipani, iipleyiti, izitya, izitya kunye nezinto zokuhlamba izitya.
Ukuphumla lula kwi queen ubungakanani hybrid ibhedi kunye nenkumbulo foam topper ngelixa ukonwabela umbono echibini; Kubonelelwe ngeelinen neengubo. I-50" ye-Smart TV kwingalo ejikelezayo inokujongwa ebhedini okanye esofeni.
Ibhafu epheleleyo imiselwe ngeetawuli ezi-4 kunye nesomisi esivuthelayo
Sinikezela ngesantya esiphezulu seXifinity WIFI kunye ne-thermostat eyahlukileyo ukuvumela ulawulo lwakho lwemozulu, Ubungakanani obugcweleyo bewasha kunye nesomisi esinezihlanzi ezibonelelweyo, intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina.
Ukuzingela iifosili kwi-calvert cliffs state park! Amazinyo amaninzi kakrebe ukufumana!
Umbuki zindwendwe ngu- Logan
Izakufumaneka ukuba ifuneka kuyo nantoni na, ndihlala phezulu phezulu ngoko ke ndifumaneka lula ixesha elininzi. Ndiza kunika iindwendwe zam ubumfihlo obugcweleyo ngaphandle kokuba ndimenyiwe, Ngobulumko yonke indawo engasemva kunye negumbi elisezantsi le studio yindawo yakho! Nangona kunjalo ungandibona okanye usapho lwam sisebenzisa ioveni yepizza ngamanye amaxesha kwaye ioveni yepizza iyalufuna uncedo
Izakufumaneka ukuba ifuneka kuyo nantoni na, ndihlala phezulu phezulu ngoko ke ndifumaneka lula ixesha elininzi. Ndiza kunika iindwendwe zam ubumfihlo obugcweleyo ngaphandle kokuba…